Oslo, Norway, 5 December 2018 - Nevion, onye na-enye mmeri nke ndị na-emepụta ihe ndị na-emepụta mgbasa ozi na-emepụta nke ọma, kwupụtara taa na Digital Domain has selected its Virtuoso software-defined media node platform. The Oscar-winning post-production and visual effects house is using Virtuoso to support distributed pụrụ iche utịp and color-correction work for major Hollywood nka.
Digital Domain’s fame goes back more than 25 years to its collaboration with James Cameron for the visual effects on Titanic Since then it has been responsible for the effects on many feature films including Spider Man: Homecoming, Disney si Mma na ajọ anụ na Ndị na-akwụ ụgwọ: Agha ebighi ebi.
Maka ozi ọzọ banyere Nevion na ngwaahịa / ọrụ ya, biko gaa na Nevion website.
Ka-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke virtualized media mmepụta, Nevion enye netwọk na agbasa ozi n'ikuku akụrụngwa na mgbasaozi n'ikuku, Telecommunication enye ọrụ, ụlọ ọrụ gọọmenti na ndị ọzọ ọrụ. A ọsụ ụzọ na media iga, Nevion na-enyere ndị ụgbọ na management nke ọkachamara-edu video, ọdịyo na data - na ozugbo, reliably na ntukwasi-obi - si igwefoto n'ụlọ. Site ọdịnaya mmepụta ka nkesa, Nevion ngwọta na-eji ike isi egwuregwu na ndụ ihe gafee n'ụwa. Ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu n'ụwa media iche iche na telecom enye ọrụ were Nevion technology, gụnyere AT & T, NBC Universal, Sinclair Broadcast Group Inc., NASA, Arqiva, BBC, CCTV, EBU biotek, TDF na Telefonica.
Maka ama ndi ozo biko gaa na www.nevion.com. Soro Nevion na Twitter @nevioncorp
Ọhụrụ posts site Editor (-ahụ ihe niile)
Universal Electronics Award-Winning Products and Technology Continue to Drive Adoption of Entertainment Voice Control Across Europe for Pay-TV Operators - December 6, 2018
Telia Selects ATEME to Power its Next Generation OTT Offering in Estonia - December 6, 2018
Broadcast Engineer Broadcast Engineering SoftAtHome, MStar, CES2017 Ụgha & Akụrụ Ultra HD Forum video Engineer virtual eziokwu	2018-12-05
Previous: Facilis and BrandStar Team Up to Enable 4K+ Production
Osote: More Accolades for Sigma 14-24mm F2.8 Art and 70mm F2.8 Macro Art Coming Into Focus This Holiday Season